हिमाल खबरपत्रिका | बलात्कारको विषवृक्ष
बलात्कार– स्त्रीद्वेषी संस्कृतिमा हुर्कने विषवृक्ष हो । हामी त्यही विषवृक्षका फेदमा अनेक गीत, कविता, नीति श्लोक र गाउँखाने कथा भन्दै, सुन्दै, रमाइलो मानेर बसिरहेका छौं।
पूर्व जानकारीः यस लेखमा यौन, जननाङ्ग, यौन अत्याचार, बलात्कार, सम्भोग आदिलाई प्रत्यक्ष बुझाउने वा सङ्केत गर्ने केही शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ। छापामा यौनसित सम्बन्धित शब्द र चर्चा पढ्न नरुचाउने तथा प्रचलित मूल्य, मान्यता, नियम र विचारको आलोचना गरेको सुन्न नसक्नेहरूसित अग्रिम क्षमायाचना।
बलात्कारीले आफूलाई वा आफ्ना नजिकका मान्छेलाई अझ् क्षति पुर्‍याउन सक्ला भनेर ?
यो परिभाषामा रहेका दुई वटा शब्द, ‘जबर्जस्ती’ र ‘सम्भोग’ ले धेरै कुरा व्याख्या गरे पनि अब ‘स्त्रीको इच्छाविरुद्ध जबर्जस्तीसित गरिएको सम्भोग’ ले मात्र बलात्कारको अर्थ समेट्दैन । त्यो शब्दकोश निस्केताका समाजमा प्रचलनमै नरहेको शब्द ‘तेस्रोलिङ्गी’ ले अहिले कानूनी मान्यता समेत पाइसकेको छ । यस सम्बन्धमा ‘सतीत्व’ शब्द पनि सान्दर्भिक छैन, किनभने यो शब्दले वैवाहिक बलात्कार र यौनकर्मीहरूलाई हुने बलात्कारलाई समेट्न दिंदैन । माथिको परिभाषाले पुरुष, खासगरी बालक र किशोरहरूमाथि हुने बलात्कारलाई पनि समेट्दैन ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको डर–धम्की दिएर, शारीरिक वा मानसिक प्रताडना दिएर वा बन्दी बनाएर उसको योनी, गुदद्वार वा मुखमा लिङ्ग वा कुनै अन्य अङ्ग वा कुनै बाह्य सामग्री प्रवेश गराएर गरिने यौनकार्य वा यौन प्रताडना नै बलात्कार हो । कुनै शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यस्थितिका कारण वा कुनै लागूपदार्थ वा औषधिको प्रभावमा रहेर आफ्नो सहमति व्यक्त गर्न नसक्ने र जबर्जस्ती करणी हुँदा प्रतिकार गर्न नसक्ने व्यक्तिसित गरिएको कुनै पनि प्रकारको मैथुन बलात्कार हो । कानूनतः नाबालिग व्यक्तिसितको कुनै पनि किसिमको मैथुन वा यौन गतिविधि उसको सहमतिमै गरिएको भए पनि बलात्कार हो ।
हाल्नेछु ... मा पुर्‍याउँछु मुटुमा झ्क्निेछु आन्द्रै सरी ।”
कुनै पनि समाजलाई हामीले त्यसको पृष्ठभूमिबाट बुझनुपर्छ । आफ्नो इतिहास र संस्कृतिलाई हेर्ने हामीसित दुई वटा विकल्प छन् । पहिलो, ‘हाम्रो परम्परा महान् थियो र छ’ बाट कुरा शुरू गर्ने विकल्प र दोस्रो, ‘हाम्रो धर्म र संस्कृतिमा पनि धेरै समस्या थिए र हामीले ती सबैबाट पाठ सिकेर आफ्नो र आउने समयलाई राम्रो बनाउनुपर्छ’ भन्ने विकल्प । अहिले अनेक किसिमका जोखिम मोलेर दोस्रो विकल्प रोज्ने मानिसहरूको संख्या बढिरहेको छ । उनीहरू मनुस्मृति लगायतका केही ग्रन्थहरूले गरेको महिलाको चित्रण र तोकेका भूमिकाहरूको विरोध गर्छन् र त्यसलाई स्त्रीद्वेषी भन्छन् ।
मान्छे प्राकृतिक रूपमा पनि कमजोर र बलियो हुन्छ । तर त्यसभन्दा बढी कसैलाई संरचनागत रूपमै पनि कमजोर बनाइन्छ । महिला र तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई कमजोर बनाउन शताब्दीयौंदेखि अनेक किसिमका प्रपञ्च गरिएका छन् । उनीहरूको कपाल, बस्त्राभूषण, आवागमन र बसउठ र शरीरको पवित्रतासित सम्बन्धित घोषित अघोषित नियमहरूले महिलालाई जहिले पनि बाँधेका छन् । तर तीमध्ये केही त यति परिमार्जित भइसकेका छन् कि ती महिलाको इज्जत, प्रतिष्ठा बढाउन, परिवार र समाजको थिति बलियो बनाउन तथा उनीहरूको रक्षा गर्नकै लागि बनाइएका जस्ता लाग्छन् । उनीहरूलाई बोकाइएको इज्जत, सतीत्व, अस्मिता (चलनचल्तीको अर्थमा), पवित्रता र चोखोपनको भारीकै कारण उनीहरू शिर उठाएर हेर्न पनि नसक्ने गरी कजिएका हुन्छन् । त्यतिले नपुगे उनीहरूको शीलस्वभाव, लचिलोपन र सहनशीलताका सुन्दर वर्णन गरिएको हुन्छ । तिनले झ्ट्ट हेर्दा महिलाको प्रतिष्ठा बढाएको देखिए पनि प्रकारान्तरले उनीहरूलाई कमजोर बनाइरहेका हुन्छन् ।
बलात्कार मान्छे सँगसँगै जन्मिएको एउटा दुष्प्रवृत्ति हो, जो संसारका सबै समाजमा सधैंभरि विद्यमान छ । सभ्यताको परिमार्जनसँगै मान्छेको जातले आफ्ना धेरै खराब प्रवृत्ति र प्रचलनहरू छाड्दै गएको छ, तर बलात्कार छुट्न सकेको छैन । बरु समाज सँगसँगै यो अझ् जटिल हुँदै गएको छ, किन ?
हाम्रो समाजमा अहल्या र द्रौपदी मात्र होइन, उनका पतिको अपमान गर्न विष्णुले बलात्कार गरेका वृन्दाहरू पनि धेरै छन्, र धेरै छन् सूर्यले ‘कानबाट गर्भाधान’ गरेका कुन्तीहरू पनि । तर बलात्कारका धेरै वटा घटनाहरूको ‘जिग्सअ पजल’ लिएर बस्दा आउने निष्कर्ष हो बलात्कारको मूल कारण चाहिं बलात्कारको संस्कृतिले चित्रण गरेको ‘कमजोर नारीत्व’ र ‘चाहेको हासिल गरेरै छाड्ने पुरुषार्थ’ । कमजोर व्यक्तिलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना नै हो र त्यसलाई मलजल गर्ने दण्डहीनता । शक्तिको प्रदर्शन मात्र कि यौनको तुष्टि पनि ?
यौन दुव्र्यवहार र बलात्कारका कारण धेरै छन् । युद्धमा ‘शत्रुपक्ष’ का महिलाहरूमाथि हुने बलात्कारबाट कुनै पनि द्वन्द्वग्रस्त ठाउँ मुक्त हुँदैनन् । आर्थिक र सामाजिक कारणले हुने यौन शोषण र बलात्कार पनि सर्वत्र हुन्छ । शक्तिको प्रदर्शन, साटो फेर्ने चाहना, रिसको अभिव्यक्ति स्वरूप पनि बलात्कार हुन्छ र रक्सीले त्यसको सम्भावना अझ् बढाएको देखिन्छ । परपीडा, यौन कुण्ठा लगायतका मानसिक विकारका कारण बलात्कार गर्नेहरू पनि हुन्छन् । यस्ता कारण जति गने पनि पुग्छ ।
अनि विपरीत लिङ्गीका यौन अङ्ग र स्वाभाविक यौनक्रिया–प्रक्रियाका बारेमा उठेका अबोध उत्सुकताहरूलाई ढाकिदिए सामूहिक सम्भोग र अरू विकारग्रस्त यौन व्यवहारका दृश्यहरूले । युवाहरूका लागि यौनको सौन्दर्य, मिठास, पारस्परिकता र प्रेमपूर्ण सम्बन्धका महत्व बुझउने सामग्री न पाठ्यपुस्तकमा आए, न कुनै एनजीओले बनाएका कार्यक्रममा नै । न कुनै लेखक प्रकाशक त्यस्ता ‘अश्लील’ कुरा लेख्न छाप्न नै तयार भए ।